Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. #कोरोना – Janata Live
काठमाडौं– नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ४५५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । ६,२१४ जनाकाे परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट ३९८ र एन्टिजेन विधिबाट ५७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा १४७ जना, ललितपुरमा ४९ र भक्तपुरमा २० जना छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ८०४ जना संक्रमणमुक्त बनेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म कूल संक्रमितमध्ये ७ लाख ७९ हजार १५४ जना संक्रमणमुक्त भइसकेका छन् । नेपालमा निको हुने दर ९६.९ प्रतिशत रहेको छ । देशभर हाल १३ हजार ८५३ जना सक्रिय संक्रमित छन् । यसमध्ये १२ हजार ७९१ जना होम आइसोलेसनमा,...
काठमाडौं– नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा २,५४८ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ । विभिन्न प्रयोगशालामा परीक्षण ९ हजार ३३ पीसीआर परीक्षणमा २,१३७ जना र ३,३४५ एन्टिजेन परीक्षणमा ४११ गरी २,५४८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट ५५ जनाको ज्यान गएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २,३९६ जना निको भएका छन् । शनिबार मात्रै कोरोनाबाट १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ३,२१८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
काठमाडौं– बालबालिकालाई कोरोना भाइरसले खासै असर गर्दैन, सङ्क्रमण भइहाले पनि चाँडै निको भइहाल्छ भन्ने सोचाइ र बुझाइ धेरैको छ । तर, यो सोचले गम्भीर स्थिति पुर्‍याउन सक्ने विज्ञको चेतावनी छ । कोरोनाको तेस्रो लहरले बालबालिकालाई बढी समस्यामा पार्न सक्छ भन्ने आइरहँदा बालबालिकालाई महामारीबाट जोगाउन सबैले ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ । कोरोना भारसविरुद्ध कुनै पनि मुलुकमा बालबालिकालाई खोप लगाइएको छैन । बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमण हुन थाल्यो भने सङ्क्रमण दर कति चाँडो बढ्छ र त्यसले कति क्षति पु–याउन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन भइरहेको छ । धुलिखेल अस्पतालका नर्स मनिता कर्माचार्यकी छ वर्षीया छोरीलाई कोरोना सङ्क्रमण भएपछि निकै गाह्रो भयो ।...
काठमाडौं– देशभर कोरोना संक्रमणविरुद्ध खोप अभियान जारी छ । खोप कस्तो व्यक्तिले लगाउने र कस्तो व्यक्तिले लगाउन नमिल्ने रु आमसर्वसाधारणमा अन्योलता छाएको छ । केही खोप केन्द्रहरूले उमेर मात्रै सोधेर खोप उपलब्ध गराउने गरेको समेत पाइएको छ । केही खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाएका सर्वसाधारणको विस्तृत विवरण नराखिएको देखिएको छ । खोप लगाउनुअघि आफ्नो रोग र आफूले सेवन गरिरहेको औषधिबारे स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी गराउनुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सो विषय पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बुमा बुधबार खोप लगाउन पुगेकी २८ वर्षीय शारदा कुवँरले भनिन्, ‘खोप लगाउने क्रममा मलाई उमेर सोध्नु भयो...
काठमाडौं– नेपालमा विश्वभरि महामारीको रूप लिएको कोरोनाको प्रकोप पुनः बढ्दै जाँदा संघीय सरकारले यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सक्रियता नदेखाएको पाइएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई अधिकार प्रदान गरेर रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रयास जारी राखेको सरकारले माथिल्लो निकायबाट आवश्यक योजना तथा रणनीति तय गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम न्यून मात्रामा गरेको छ । केन्द्र सरकारअन्तर्गत यसअघि उच्चस्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)मार्फत आवश्यक योजना तथा रणनीति तय गरेर कोरोना नियन्त्रणको काम हुँदै आएकोमा अहिले सीसीएमसी नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ । सीसीएमसी नेतृत्वविहीन बनेपछि पछिल्लो समय बैठक बस्न सकेको छैन भने नेतृत्व चयन गर्न प्रधानमन्त्री...
कोरोनाभाइरसले एकपटक पुनः समस्या बढाइदिएको छ । कोरोनाको नयाँ रुपमा निकै संक्रामक छ र थोरै लापरवाहीले पनि यो महामारीलाई निम्तो दिने गर्छ । बारम्बार हात धुने, मास्क लगाउने र सामाजिक दुरीका साथै तपाईंले खानपिनमा पनि असाध्यै ध्यान दिन आवश्यक छ । यो मौसममा पौष्टिक तत्व र बारम्बार पानी पिउँदा रोग प्रतिरोधी क्ष्मता बलियो बन्ने गर्छ । यसले गम्भीर रोग र संक्रमणको खतरा कम हुने गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाबाट बच्नका लागि यस्ता खानेकुराको सेवन गर्न सुझाएको छ । कोरोनाबाट बच्नका लागि कस्तो हुनुपर्छ डाइट ? तपाईंले आफ्नो खानामा विभिन्न प्रकारको ताजा फलफूल र अनप्रोसेस्ड फूड समावेश गर्नुपर्छ । यसमार्फत्,...
काठमाडौं– पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप १,५८४ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरिएको ६,५८३ पीसीआर परीक्षणमा १,५८४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । यस्तै ४,३२१ एन्टिजेन परीक्षणमा ७१३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणबाट कुल २,२९७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षणमा कोरोना देखिनेको संख्या ६ लाख २२ हजार ६४० पुगेको छ । यस्तै, २४ घण्टामा ३,१३० जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । योसँगै कोरोना संक्रमण भइ निको हुनेको संख्या ५ लाख ५९ हजार ९२८ पुगेको छ । मन्त्रालयले दिएको...
थप ३,४५६ ले जिते कोरोना, २,४४२ नयाँ थपिए, ५१ जनाको मृत्यु
काठमाडौं– नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३,४५६ कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएका छन् । नेपाल संक्रमित निको हुने दर ८८.५ प्रतिशत पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म ५ लाख ५६ हजार ७९८ जना संक्रमित निको भइसकेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २,४४२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा १० हजार ९५६ जनाको पिसिआर र एन्टीजेट परीक्षण गर्दा २,४४२ जनामा कोराना पुष्टि भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार ६,६७७ जनाको पिसिआर र ४,२४९ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा पिसिआरमार्फत एक हजार ४२१ जना र एन्टीजेटमार्फत एक हजार २१ जना संक्रमित पुष्टि...